Uselobizela amanye amagoli uLekay ngemuva kokulishaya kwiMaritzburg - Impempe
Uselobizela amanye amagoli uLekay ngemuva kokulishaya kwiMaritzburg
Ukushaya igoli behlula iMaritzburg United ngo 3-0 emdlalweni wabo wokugcina sekumenze wahalela ukuthi kube yinto ayenza njalo ukugaxa ibhola enethini umgadli weTS Galaxy, uWayde Lekay (osesithombeni).
Le nsizwa eneminyaka engu-23 edabuka eKapa, nebidlala kwiSteenberg United ngesizini edlule, iyona evule inkundla ngegoli elishaye ngomzuzu ka-28.
OLindokuhle Mbatha noFelix Badenhorst nabo babe sebengeza ngawabo esiwombeni sesibili ukuze baqinisekise ukuthi leli qembu lika-Owen Da Gama libuya nawo ephelele amaphuzu eMgungundlovu.
“Ukushaya igoli kukunika ukuzethemba okuthe xaxa,” kulanda uLekay. “Ukusuka lapho kusuke sekumele uthathe lokho kuzethemba uye nakho emidlalweni elandelayo. Akusho ukuthi usuzibona uyinto enkulu kodwa ukuqinisekisa ukuthi uyazethemba ngokwanele ukuthi ungene ezikhaleni ezikubeka ethubeni lokushaya amagoli.
“Ngicabanga ukuthi sengikhulile ngaphansi kuka-Owen. Kusukela ngosuku lokuqala efikile lana ulokhu engitshela ukuthi ngidinga ukungena ezikhaleni ezizongenza ngithole amathuba okushaya amagoli. Uyangigqugquzela ukuthi ngikhahlele ipali uma kuvela ithuba noma ngabe lincane kanjani. Uthi kumele ngibajike abangigadile ukuze ngidlule kubo ngiyoshaya igoli,” kuqhuba uLekay.
“Kusemnandi ukudlalela u-Owen ngenxa yalokho. Nokuba khona kuka(Shaun) Bartlett osiza kakhulu abagadli nabadlali abahlaselayo kuyawenza umehluko. Kuyasisiza kakhulu.”
ULekay uthe ukuba ngasemsileni kweRockets yinto engabaphethe kahle futhi abafuna ukuyilungisa maduze nje. IGalaxy kumanje isendaweni ka-13, kanti iwashiya ngamaphuzu amabili nje vo amaqembu angezansi kwayo.
“Ukuba semsileni kunzima,” usho kanje. “Kubi futhi kuyisimo esinzima esenza nempilo yakho ingabi nenjabulo, ngoba uhlale unokucabanga ukuthi iqembu lisemsileni.
“Kodwa sinabadlali abasezingeni eliphezulu, futhi besazi ukuthi sizofika isikhathi la sizojika khona izinto sisuke laphaya.
“Obekudingeka nje, wukuthi siye emidlalweni ngokuzimisela nokuzitshela ukuthi sizowina. Yilokho umqeqeshi akugqugquzelayo. Wasitshela efika ukuthi sizophuma laphaya, nathi samkholwa. Uma sizoqhubeka ngendlela esenza ngayo njengamanje sizophuma otakwini lwezembe bese senyukela siye phezulu kwilogi.”
Ukuzethemba nomgqigqo weGalaxy kuzovivinywa ngokuphelele uma seyibhekene ne-Orlando Pirates emdlalweni weDStv Premiership e-Orlando Stadium ngoLwesibili.
IBucs ibonakale ibuyela nayo emgqigqweni wayo eqale ngawo isizini ngesikhathi ishiya iMaritzburg ikhala seyiwawole wonke amaphuzu eHarry Gwala Stadium ngoMgqibelo.
“Angikholwa wukuthi umphumela ulawulwa yifomu. Kuzoba wumdlalo onzima ozodinga ukuthi siye kuwo sizilungiselele kahle ngokwengqondo, sikhohlwe ukuthi bona yini abakwazi ukuyenza bese sigxila kulokho thina esikwenza kangcono. Uma singenza njalo, ngiyacabanga singabuya namaphuzu amathathu,” kuchaza uLekay.
Previous Previous post: Imvula icishe yaphazamisa iSuperSport ekuwoleni amaphuzu eThohoyandou
Next Next post: ILeopards isixoshe umqeqeshi osanda kubukisa ngeBucs